Iwo mapfumbamwe akanakisa emadziro ekushandisa eiyo iPhone | IPhone nhau
Ignatius Room | | IPhone maapplication, App store
Imwe neimwe nyowani vhezheni yeIOS inotipa nyowani fondos de pantalla, mamwe acho anongoenderana nemhando nyowani dzinotangwa nekambani pamusika gore rega rega. Pakati pemapikicha atinogona kuwana zvine simba, zvakagadziriswa uye zvinorarama (mari iyo kana uchimanikidza pa screen kuchaja kufamba). Aya marudzi emamiriro ekumashure anongoratidzira mafambiro pane yekuvharira sikirini yemidziyo inoenderana.
Vazhinji vashandisi vanonakidzwa nekutsvaga mifananidzo yekushongedza yavo iPhone, ingave yavo yavanofarira nhabvu timu, bhaisikopo rekupedzisira ravakaona mu cinema, vana vavo kana hama, kana kungoita zvavanofarira. MuApp Store tinogona kuwana nhamba hombe yekushandisa iyo titendere kuti gadzirisa yedu iPhone nenzira iyi. Muchikamu chino tinokuratidza izvo zvinotipa mhinduro dzakanakisa.
1 Wallpaper zvirongwa zve iPhone
1.1 Retina Wall - HD Mapikicha & Mahure
1.2 WLPPR - Yakakwira res mifananidzo yekumba uye yekuvhara skrini
1.3 Vellum - Artistic Mapikicha uye maShure
1.4 Everpix - Backgrounds & Mapikicha & Mifananidzo
2 Rarama Wallpaper Wallpaper zvei iPhone
2.1 Mahara Live Mapikicha
2.2 Urarame Mapikicha kwandiri
2.3 Rarama Mapikicha e iPhone 6s
2.4 Rarama Mapikicha e iPhone 6s, 6s kuwedzera & iLive Pro
Wallpaper zvirongwa zve iPhone
Retina Wall - HD Mapikicha & Mahure
Ads zvakare zvakashata zvakashata kana isu tichida kunakidzwa neichi chishandiso mahara, kunyange zvakadaro tinogona kuvabvisa kwema 3,29 euros. Pakati pezvikamu zvakasiyana izvo Retina Wall anotipa, isu tinowana: zvirimwa, zvisingabvumirwe - 3D, guta - hupenyu, zvigadzirwa - zvakapusa (zvinosanganisira minimalist mapikicha), chikafu - zvinwiwa, mhuka, vanozivikanwa uye nyeredzi, mota - ndege, makatuni, nzvimbo, mavhidhiyo evhidhiyo, mitambo, mumhanzi, fashoni, mafirimu, tekinoroji, zororo ...
Inoda iOS 8.0 kana gare gare uye inoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod touch. Retina Wall ane avhareji chiyero chenyeredzi nhatu pa3 dzinogoneka.
Wallpaper Rondedzero: Rarama 4K Retinavakasununguka
WLPPR - Yakakwira res mifananidzo yekumba uye yekuvhara skrini
WLPPR inotipa gumi reunganidzwa ratinogona kuwana mushure mekutenga-mukati-app kutenga, 10 euros yega yega muunganidzwa 1,09 euros yeiyo seti yese, ichipa isu huwandu hwemazana zana nemakumi mapfumbamwe. Ichi chishandiso chinotipa setiraiti mifananidzo yenzvimbo zhinji dzenyika, ichiwedzera zvinyorwa zvitsva kumabara ayo vhiki rega rega, kuti tirege kumboneta kushandisa iwo iwo iwo mapikicha.
Inoda iOS 8.0 kana gare gare uye inoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod touch. WLPPR ine avhareji chiyero che4,5 nyeredzi kubva pa5 inogoneka.
WLPPR - kumashure mifananidzovakasununguka
Vellum - Artistic Mapikicha uye maShure
Vellum inotipa anokwana kusvika pamatanhatu gumi nematanhatu matinogona kuwana nhamba hombe yemapikicha kuti tiite iwo Wallpaper yemaviri evharidhi uye yekumba chidzitiro. Vellum inotipa iyo minimalist interface iyo inokanganiswa chete neshambadziro izvo zvinoratidzwa mairi (inowanikwa kuti utorwe mahara), kushambadza kwatisingakwanise kunzvenga nekutenga mukati me-app.
Inoda iOS 9.0 kana gare gare uye inoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod touch. Vellum ine chiyero chepakati chenyeredzi shanu pane shanu.
Mifananidzo ye Vellum Wallpapervakasununguka
Everpix - Backgrounds & Mapikicha & Mifananidzo
Kufanana neese maficha andinokuratidza mune ino chinyorwa, ese Everpix mifananidzo iri muZere HD resolution, ichichinjika kune iyo skrini yeiyo iPhone, iPad uye kunyangwe Apple Watch. Everpix inotipa zvikamu gumi neshanu: Abstract, Zvisikwa, Space, Mufashoni, Mhuka, Maguta, Minimalism, Cartoon, Chikafu, Mota, Sport, Mumhanzi, Mahoridhe. Kana iwe uine Apple Watch uye iwe kazhinji uchichinja mufananidzo weiyo firimu yako inoratidzwa kumashure, Everpix ndiko kunyorera, Anwendung inowanikwa mahara nezviziviso kana ye $ 0,99 pasina kushambadzira.
Inoda iOS 8.0 kana gare gare uye inoenderana ne iPhone, Apple Watch, iPad uye iPod touch. Everpix ine avhareji chiyero che4,5 nyeredzi kubva pa5 inogoneka.
Everpix Mifananidzo 4Kvakasununguka
Everpix Pro - Backgrounds, Mifananidzo9,99 €
Rarama Wallpaper Wallpaper zvei iPhone
Rarama mapepa zvinowirirana chete nemidziyo ine 3D Kubata tekinoroji, saka isu tinogona chete kuishandisa pane iyo iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 uye iPhone 7 Plus. Kana iwe ukatorera aya maapplication pamidziyo isingawirirane neiyi tekinoroji, iwe unozongokwanisa chete kunakirwa nhando mifananidzo, uchitora nyasha dzese kubva kuiyi tekinoroji uye zviri pachena kubva kumifananidzo.
Ramba uchifunga kuti aya akasimba enhunzi ekushandisa pane yekuvharira skrini yeedu iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 kana iPhone 7 Plus chishandiso chinongoshanda chete kana uchidzvanya pakiyi skrini. chero bedzi tisina Low Power Mode yakavhurwa, nzira yekudzima yakawanda yekuona mhedzisiro uye kazhinji otomatiki maitiro senge ekuvandudzwa pamwe naHey Siri, otomatiki email kutarisa
Tinogona zvakare kusarudza ku gadzira zvisikwa zvedu nekhamera ye iPhone yedu, chero bedzi ichienderana nebasa rekurarama, uye uvashandise seye Wallpaper yeiyo yekuvhara skrini yeyedu kifaa.
Mahara Live Mapikicha
Yemahara ehupenyu hwemapikicha anotipa isu hombe nhamba yemapopicha emifananidzo kana mararamiro ehupenyu. Kuva application isingape mukati me-kutenga kutenga kubvisa ma ads, isu tichafanirwa kudzivirira kushambadzira kunoerekana kwave kuzara skrini yakazara muchimiro chevhidhiyo. Kushambadzira kwacho kuri pamusoro pechinhu pamusoro pechinhu ichi, asi kana isu tisingade kushandisa mari pane iyi mhando yekushandisa kuti tishandire iyo yekuvharira chidzitiro chedu chishandiso ichi chikumbiro chako, nekuti mari yainotipa inokatyamadza, kunyangwe isina kuiswa muzvikamu.
Yemahara Yemahara Wallpaper inoda iOS 9.1 kana gare gare uye inoenderana neiyo iPhone, iPad, uye iPod touch. Iwe hauna-mukati-app kutenga.
Urarame Mapikicha Xvakasununguka
Urarame Mapikicha kwandiri
Nekuda kweichi chishandiso isu tinokwanisa kuratidza kwedu skrini ine inoshamisa zviitiko zvekufambisa mifananidzo yemhuka, zvisingabvumirwe mapatani, maguta, hove uye kunyangwe kuputika kwepasi. Live Wallpaper kwandiri zvinoda iOS 9.1 kana gare gare, inoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod touch uye Iyo ine avhareji chiyero chenyeredzi ina kubva pa4 inogoneka.
Rarama Mapikicha e iPhone 6s
Ichi chishandiso chinotipa inopfuura zana inofamba mamashure, ese iwo anotora emazuva ezuva nezuva mifananidzo. Kunyangwe zita racho risingafungidzire zvachose, mhedzisiro yarinotipa yemahara yakanaka chose, kuve unofanirwa-kuva neapp kunyanya kana tisingade kushandisa mari nemhando idzi dzeapp. Iyo yega, asi ndicho chakanzi poster chinotikumbira kuti tigovane chishandiso kuburikidza neyedu Facebook account.
Urarame Mapikicha eApple 6s - Mahara Mifananidzo Mifananidzo uye Tsika Dynamic kumashurevakasununguka
Rarama Mapikicha e iPhone 6s, 6s kuwedzera & iLive Pro
Rarama Mapikicha eApple 6s, ivo vanogona kutovandudza zita racho, rinotipa mazana eEpamoyo mapikicha akagoverwa mune hombe nhamba yezvikamu senge mhuka, mapato, mafirework, maruva, nzvimbo, timelapse ... Kusiyana nezvimwe zvinoshandiswa, Live Wallpaper ye iPhone 6s Unotiratidza kushambadzira zvishoma nezvishoma. Inowanikwa kuti utorwe mahara, asi kana tichida kuabvisa uye kuvhura mamwe mapoka, tinogona shandisa ye-in-app kutenga iyo ine mutengo we3,29 euros.
Rarama Mapikicha e iPhone 6s, inoda iOS 9.1 kana gare gare uye inoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod touch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Iyo 8 yakanakisa Wallpaper maapplication eiyo iPhone
Tevera zvakanakisa zveGiro d'Italia nechishandiswa chepamutemo
Amazon Prime Vhidhiyo iri kuuya kuApple TV gare gare gore rino